ओलि सरकारले कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सेनाको ब्यारेक राख्ने तयारी गर्दै छ,ताली या गा’ली? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
ओलि सरकारले कालापानी क्षेत्रमा नेपाल सेनाको ब्यारेक राख्ने तयारी गर्दै छ,ताली या गा’ली?
सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिकास्थित कालापानी क्षेत्रमा नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्‍ने तयारी गरेको छ। भारतीय अति’क्रमणमा परेको व्याँस गाउँपालिकास्थित एक स्थानमा नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्‍ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको हो।
सरकारले २०६७ सालमा स्थापना गरेको अपिनम्पा संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत व्याँस गाउँपालिकाभित्र नेपाली सेनाको ब्यारेक राख्‍ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सेनाको ब्यारेक राख्‍न सम्भावित ती’न स्थानको पनि बुध’बार दार्चुला पुगेका प्रधानसेनापति पू’र्णचन्द्र थापाले अव’लोकन गर्ने भएका छन्।
Previous नेपालको झण्डा जलाउने भारतियलाई सरकारले चाडो भन्दा चाडो का’रबा’ही गरोस् ,,शेयर गरौं!
Next भारत सरकारको बे’बकुफीले नेपाल टा’ढियो दु’खित छौं : भारतीय पुर्वमन्त्री,,हेर्नुहोस!